7 qalab si loogu abuuro khariidadaha fikradaha internetka iyo mobilkaaga | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | 23/07/2021 09:42 | Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Khariidadaha fikradda waa aalad waxtar u leh muuqaalka xogta, xafid fikradaha, bartaan oo curiyaan fikradaha. In kasta oo aad ku sameysid gacanta qalin iyo warqad had iyo jeer waxay noqon doontaa ikhtiyaar, tikniyoolajiyaddu waxay na siisaa fursado aan dhammaanayn Maxaad uga faa’iideysan la’dahay? Qoraalkan Waxaan ka soo ururiyey 7-da qalab ee bilaashka ah si aan ugu abuuro khariidadaha fikradda khadka tooska ah iyo telefoonkaaga gacanta. Mid kastaaba wuxuu leeyahay faa iidooyinkeeda waxaadna u baahan doontaa inaad qiimeyso midka ku habboon baahidaada. Sii wad aqrinta qoraalkan oo waxaad uheshaa madal kugu habboon Waxaad awoodi doontaa inaad xirfadahaaga gorfeynta aad u gaarsiiso heerka ku xiga!
5 Khariidad caqli badan
Lucidchart waa a barnaamij weyn oo maskaxdaada looga dhigo khariidado, Web-app-kan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isku darto jaantusyo iyo jaantusyo si aad u abuurto soo koobitaanno heer sare ah oo shaki la'aan kaa caawin doona inaad si fiican u xusuusato fikradaha.Abuuritaanka iyaga ayaa ah mid aad u fudud, waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad jiido oo aad hoos u dhigto sanduuqyada taas oo qoraalka uu ku socon doono oo lagu buuxin doono intaad ku socoto. Runtii waa dhakhso. Adiguna waad awoodaa geli dhammaan faahfaahinta aad rabto, midab sii ama ku dheji sawirro.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka barnaamijka ayaa ah inuu kuu oggolaanayo inaad ku soo dhoofsato feylasha qaab .txt isla markaana si toos ah u sameeya khariidad maskaxeed oo leh xogta lagu soo ururiyay Marka aad diyaar garowdo, waad u dhoofin kartaa qaabka aad doorbideyso (PDF, JPEG iyo PNG).
Whimsical Waa a barnaamijka websaydh badan. Kaliya maahan inay kuu ogolaato inaad abuurto khariidadaha maskaxda, waxaad sidoo kale abuuri kartaa jaantusyo qulqulaya, sabuurado ay ku qoran yihiin qoraalo dheg dheg leh si loo xasuusto xogta muhiimka ah iyo xitaa barnaamijka iyo jeesjeeska naqshadeynta websaydhka.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijkan aniga aniga waa inuu yahay mid aad u macquul ah oo si sahlan loo isticmaali karo. Sidaa darteed, markay tahay sameynta dulmar, waqti ku lumin meysid inaad sanduuqyo iyo fallaaro si fiican u dhigatid, barnaamijku si toos ah ayuu u sameyn doonaa.
SimpleMind + es barnaamij bilaash ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu dhiso khariidadaha maskaxda taas oo sahlaysa barashada. Waxaa loo heli karaa Windows iyo Mac iyo macruufka iyo kiniiniyada Android ama qalabka gacanta. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah taas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku sameysid khariidado dhowr ah hal bog, wax lagama maarmaan ah haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad awood u yeelatid inaad aragtid fikradahaaga oo dhan si aad u wada eegto.
Sidoo kale, oo leh SimpleMind + waad ku dari kartaa sawirada qaabeyntaada. Taleefoonnada iyo kiniiniyada sidoo kale waxay ku siinaysaa awood aad ku darto fiidiyowyo iyo qoraallo cod ah.
Mindmeister Waa a app aad u dhameystiran si loo abuuro jaantusyo, sidoo kale way u oggolaanaysaa abuuraan naqshado aad u qurux badan, oo bixiya noocyo kala duwan oo midabbo kala duwan leh iyo qaabab sanduuqa qoraalka oo kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa qoraallo iyo faallooyin dheeri ah sanduuqyada, kuwani laguma arko nashqadda weyn, waxay muuqan doonaan oo keliya markaad gujiso.
Waxay kaloo bixisaa a noocyo badan oo astaamo ah kaa caawin kara inaad xoojiso fikradaha.l! Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah iyadoo nooca bilaashka ah waxaad sameyn kartaa kaliya seddex khariidadood in kasta oo ay sidoo kale run tahay in rukunka "shaqsiyeed" oo ay ku jiraan khariidadaha maskaxda ee aan xadidnayn ay aad u jaban yihiin (4.99 euro bishii)
Khariidad caqli badan
Khariidad caqli badan es mid ka mid ah kuwa ugu cadcad, waa mid aad u fududahay in la isticmaalo waana gabi ahaanba bilaash, oo aan lahayn xayiraad. Ka sokow aad u waxtar u leh sameynta jaangooyooyinka shaqsi ahaan, waxay kaloo ku siinaysaa ikhtiyaarka aad kula wadaagi karto qof kasta oo kale oo ay wada shaqeeyaan.
Qodob kale oo togan ayaa ah barnaamijkani wuxuu u oggolaanayaa khariidadaha in lagu dhex daro shabakadaha iyo boggaga adoo adeegsanaya xiriiriye. Sida iska cad, haddii ay tahay wax shakhsi ah oo aadan rabin inaad ku daabacdo meel kasta, waxaad sidoo kale ku soo dejisan kartaa qaab SVG, PNG iyo JPG.
Canva waa barnaamij loo isticmaali karo ku dhowaad wax walba. Waxay ku dhejineysaa tusaalooyin qashin ah oo la jaan qaadaya baahiyahaaga, iyo haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad abuurto a khariidad fikradeed ama qaab muuqaal leh qaab soo jiidasho leh, waxaad joogtaa meesha saxda ah.
Waxaad awoodi kartaa ka soo shaqee shaxanka ama xoqidaHaddii aad doorbideyso inaad sameysato dukumiinti maran oo leh cabir qaas ah oo aad daryeesho naqshada naftaada. Faa'iidada weyn ee Canva waa taas arjiga gudahiisa waxaad ka heli doontaa maktabad ballaadhan oo sawirro iyo sawirro ah, sidaa darteed waad ku dari kartaa dhammaan ilaha adigoon ka bixin madal.
Canva sidoo kale waxay bixisaa suurtogalnimada wada shaqeyn wadashaqeyn ah iyada oo loo marayo xiriiriye waana mid la jaan qaada kombiyuutarada, kiniiniyada iyo macruufka iyo aaladaha gacanta ee Android.
Waa barnaamij layaab leh waayo, samee khariidado maskaxeed oo fududeynaya barashada iyo jiilka fikradaha, ayaa leh darajo aad u wanaagsan oo ku jirta Play Store (4,7 / 5) iyo inta badan dib u eegis wanaagsan. Waxay ku habboon tahay Windows, Mac iyo Linux iyo qalabka mobilada ee iOS iyo Android.
Mindomo es Aad u fududahay isticmaalka waana ikhtiyaarka la tilmaamay haddii aad u baahato si fudud loo abuuro naqshado. Adoo ku dhajinaya khariidada maskaxda shaashadda, waxaad abuuri doontaa nooc ka mid ah bandhig muuqaal ah oo diyaar u ah in lala wadaago dadka kale. Sidoo kale, sida wax walba daruurtii baa lagu kaydiyaa waxaad marwalba gacanta kuheysaa khariidadaha fikirkaaga marka aad u baahatid iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 7 qalab si loogu abuuro khariidadaha fikradda qadka iyo mobilkaaga